Yangu iPhone Yakanamira Mune Mahedhifoni Mode. Heino Kugadzirisa! - Iphone
haigone kuongorora server server haina kuvimbwa
iphone haizobatanidze kune itunes pane mac
ipad haigone kubatanidza kune internet asi wifi inoshanda
netsaona dzadzimwa tsamba app pa iphone
sei kudzima voicemail pane iphone
Yangu iPhone Yakanamira Mune Mahedhifoni Mode. Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Uri chokwadi kuti mahedhifoni haana kubudiswa mu iPhone yako, nekuti, hazvo, haasi. Iwe unoona 'Mahedhifoni' pamusoro pevhoriyamu inotsvedza kana iwe uchidhinda mabhatani evhoriyumu, asi yako iPhone haisi kuita chero ruzha. Iwe waedza kuomesa patsva, kuisa mahedhifoni mukati, uye kuaburitsazve, asi hazvisi kushanda. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone yakanamatira mumusoro wefoni , an hunyanzvi hunotyisa hwekutora junk kunze kwehephonephone jack yako kana Mheni chiteshi , uye magadzirisiro edambudziko zvachose !
IPhone Yangu Haina A Headphone Jack! Inogona Sei Kubatirira Mumusoro Mahedhifoni?
Apple yakabvisa headphone jack pavakaburitsa iyo iPhone 7. Yaive ine nharo kwazvo panguva iyoyo, asi vanhu vazhinji vakatamira pakushandisa mahedhifoni eBluetooth seAirPods.
Nekudaro, Apple haina kubvisa zvachose kugona kushandisa wired mahedhifoni pane nyowani iPhones. Kutenga kwako kweiyo iPhone 7 kana modhi nyowani kunosanganisira mahedhifoni ane wired ayo anobaya akananga mukati meiyo iPhone's Lightning port (inozivikanwa zvakare sechaji yekuchaja).
Iyo itsva iPhone 7, 8, kana X zvakare inosanganisira dongle iyo inoita kuti iwe ubatanidze ako ekare mahedhifoni kune yako iPhone's Mheni chiteshi. Zvisinei, Apple yakamira kusanganisira iyi dongle ne iPhone XS, XS Max, uye XR.
Kunyangwe iyo iPhone 7 uye nyowani mamodheru asina echinyakare kahedhifoni jack, ivo vanogona vachiri kunamira mune mahedhifoni mode! Matanho pazasi anobatsira iwe kugadzirisa chero modhi iPhone iyo yakanamatira pane headphone modhi.
Kwete, iPhone, Ikoko Kwete Mahedhifoni Akabatanidzwa!
Yako iPhone yakanamatira pamahedhifoni maitiro nekuti inofunga kuti mahedhifoni akaiswa mumusoro wejackphone kana Mheni chiteshi, kunyangwe zvisiri. Izvi zvinowanzo kukonzerwa nedambudziko nehedhifoni jack kana Mheni chiteshi pachayo. 99% yenguva yacho iri dambudziko rehardware, kwete dambudziko re software.
Bvisa Iwo Anogoneka Echinetso cheSoftware
Nzira yakapusa yekuona kuti dambudziko re software haisi kukonzeresa kuti iPhone yako irambe yakanamatira mumahedhifoni maitiro ndeye dzima uye dzoka zvakare. Kudzima yako iPhone, tinya ubatise bhatani remagetsi (rinozivikanwa seye Kurara / Bhatani bhatani) uye tsvedza bhatani riri padyo ne 'slide kudzima simba' mhiri kwescreen.
Kana iwe uine iPhone X kana nyowani, tinya uye ubatise Rutivi bhatani uye chero vhoriyamu bhatani kudzamara 'slide kumagetsi kudzima' inoonekwa pachiratidziri. Svetera iyo simba icon kuruboshwe kurudyi kuvhara yako iPhone X kana nyowani.
Zvinogona kutora masekondi makumi maviri kana zvakadaro kuti yako iPhone idzime, uye izvo zvakajairika. Kuti udzorere iPhone yako, bata bata bhatani (iPhone 8 uye kupfuura) kana Rutivi bhatani (iPhone X uye nyowani) kudzamara Apple logo yaonekwa pachiratidziri. Unogona kurega bhatani remagetsi kana bhatani rerutivi kana Apple logo ikaonekwa.
Kana yako iPhone ichiri yakanamatira pamahedhifoni maitiro mushure mekunge yako iPhone yadzokera kumashure, pane dambudziko rehardware ne iPhone yako. Panguva ino, dambudziko iri riri kukonzerwa ne imwe yematanho maviri:
Tsvina yakanamatira mukati memusoro wehefoni kana chiteshi cheMheni iri kupusa yako iPhone kufunga kuti mahedhifoni akaiswa mukati.
Iyo headphone jack kana Mheni chiteshi chakakuvadzwa, kungave panyama kana nemvura.
Tora Kutarisa Mukati me iPhone Yako
Bata tochi uye upenye mukati me iPhone's headphone jack kana Mheni chiteshi. Pane chero marara akasungwa mukati? Ini ndaona zvese kubva mupunga, kusvika brown goo, kune akaputsika-kurekwa matipi eanodhura mahedhifoni akanamira mukati. Kuedza kutora chimwe chinhu kubva kune yako iPhone's headphone jack kana Lightning port kwakanyanya kuomarara, uye mamwe maApple techs haatombozama.
Kutarisa-tenderera mune yako iPhones headphone jack kana Mheni chiteshi kunogona kukonzera kukuvara, asi vanhu vazhinji vandakashanda navo vakabvuma zvaive zvakafanira njodzi nekuti ivo havana chavakarasa. Dai ndaifanirwa kufungidzira, ndaiti ndakabudirira ingangoita 50% yenguva apo ini pandakaedza kutora chimwe chinhu kubva kumutengi wemusoro wephone jack pandakashanda kuApple Store.
Ndingaite Sei Kuti Nditorere Junk Kunze Kweangu iPhone's Headphone Jack?
Iko hakuna nzira chaiyo yekuita izvi, uye maApple Stores haana chero maturusi akagadzirirwa kubvisa marara kubva mumusoro wejackoni. Ikoko vari , zvisinei, mamwe maricho asina kufanira anoshandiswa neApple techs kuti vabudise zvinhu kunze. Ive nekuchenjerera - hapana imwe yeidzi nzira dzakabvumidzwa neApple nekuti ivo unokwanisa kukonzera kukuvara, asi ndakabudirira nemumwe wavo mumamiriro akasiyana.
Iyo BIC Pen Kunyengedza
Ini ndaida chaizvo kunyora chinyorwa ichi kuti ndikwanise kugovana hunyengeri uhu newe. Apple Genius yakandiratidza maitirwo azvo, uye ini ndichiri kufunga kuti inopenya. Yambiro: Peni yako handidi pona maitiro aya. Heano maitiro ekushandisa peni yeBIC kubvisa marara kubva ku iPhone's headphone jack:
Shandisa yakajairwa BIC peni uye bvisa chivharo.
Shandisa mapapiro kudhonza chinyoreso kure nepurasitiki dzimba.
Zano racho rakasungirirwa kune yakatenderera epurasitiki katuriji ine iyo inki.
Iyo inopesana kumagumo eiyo cartridge ndiyo iyo zvakakwana saizi yekubvisa marara kubva kuhedhifoni jack.
Pinza iwo magumo muhephonephone jack uye zvinyoro nyoro kusunungura marara, uye wozoizunza kunze kwe iPhone yako kana iPad.
Ini ndakachengeta yakawanda ye headphone jacks uchishandisa hunyengeri uhu. Ngwarira kuti usamanikidze zvakanyanya. Kana marara asiri kubuda, enda kune inotevera tip.
Edza kushandisa gaba remhepo yakamanikidzwa kufuridza mweya yakananga muhephonephone jack yako. Izvi zvinogona kushanda kunyangwe iwe usingaone chero chakanamirwa mukati. Mhepo yakamanikidzwa inogona kusunungura marara anokwana kuizunza kana kuiburitsa zvachose. Iva munyoro: Usanamatira hosi nzira yese kupinda yako iPhone's headphone jack uye wotanga kufuridza. Tanga kubva kunze kwe iPhone yako uye shanda nzira yako mukati.
Kana iwe usina gaba remhepo yakamanikidzwa, iwe unokwanisa edza kuzvibuditsa wega, asi ini handidi kunyanya sarudzo iyoyo nekuti mweya wedu une hunyoro hunogona kukanganisa iPhone yako yemukati matunhu. Kana iwe uchinzwa kunge usina chaunorasikirwa, saka nezvose nzira, zviedze.
Chaizvoizvo mbichana mbichana dzimwe nguva dzinogona kusvika mukati zvakakwana kudhonza chimedu chemupunga kana zvimwe zvimedu kubva muphonephone jack. Kushandisa tweezers kune njodzi, zvakadaro. Zvakafanana nemutambo unonzi Operation (naMilton Bradley). Zviri nyore kwazvo kukuvadza mativi ehephonephone jack kana iwe ukasundidzira tweezers kure zvakanyanya.
Ini Handikurudzire Izvi, Asi…
Vamwe tech-savvy vanhu (uye muchivande, mamwe maApple Geniuses) vakave nekubudirira kutora marara kubva ku iPhone headphone jacks nekukatanura iyo iPhone nekutora marara kubva pasi pezasi kweiyo headphone jack. Pane zvimwe yakanakisa teardown magwara ePhones kana uchida kuedza, asi Handikurudzire kuti uite.
Ndingaite Sei Kuti Nditorere Junk Kunze Kwangu iPhone's Mheni Port?
Kungofanana nehephonephone jack, zvinogona kunge zvakaoma kubvisa gunk nemarara kubva pachiteshi cheMheni. Nzira yakachengeteka yekubvisa marara kubva kune iPhone Mheni chiteshi ndeye kushandisa anti-static brashi.
Kana iwe ukaedza kuchenesa chiteshi cheMheni nechinhu chakaita sepaperclip kana chigumwe, unogona kuisa njodzi yekukonzera kubhadhariswa kwemagetsi mukati me iPhone yako, izvo zvinogona kukonzeresa zvakanyanya. Toothpick inewo njodzi, nekuti inogona kutsemuka uye kunamatira mukati me iPhone yako.
Nekudaro, vanhu vazhinji havana yavo anti-static brashi, uye izvo zvakanaka. Bhurocha idzva, risingashandiswi bhurasho remazino rinoita chinotsiva chakanaka kana iwe usina anti-static brashi.
Iyo Cocktail Straw Trick
Iyi nzira inogona zvakare kunzi 'kofi inomutsa' hunyengeri, sezvo chero mudziyo ungashandiswa. Flatten out the tip of your cocktail straw or coffee stirrer kuti igone kukwana mukati meiyo iPhone's Mheni chiteshi. Shandisa chidimbu chakapetana cheuswa kuti ubvise kana kuburitsa chero gunk kunze kweiyo Mheni chiteshi.
Yakadzvanywa mweya uye tweezers zvakare inogona mhinduro kana chimwe chinhu chakaiswa mune yako mune yako iPhone's Mheni chiteshi.
Ndakaedza Zvese Uye Yangu iPhone Ichiri Yakakamira PaHedifoni Mode!
Kana yako iPhone zvakadaro haisi kushanda mushure mekunge waedza zvese zviri pamusoro, pane mukana wakanaka kuti yako iPhone inoda kugadziriswa. Kazhinji, iyo headphone jack kana iyo Mheni chiteshi pane iPhone inomira kushandira chimwe chezvikonzero zviviri:
Chikonzero chakajairika chekuti iPhones inonamatira mumafoni mahedhiyo kukuvara kwemvura, uye yakawanda yenguva vanhu vasingazive kuti zvingave zvakaitika sei. Heano mafambiro ehurukuro: Ini ndaibvunza, 'Iwe uri mutambi here?', Uye ivo vangati hongu. Ini ndaibvunza, 'Iwe unoteerera mimhanzi kana uchimhanya kana kushandira kunze?', Uye ivo vangati hongu zvakare. Unogona here kufungidzira zvakaitika?
zvinorevei kana uchirota nhumbu
Yakawanda nguva, iri dambudziko rinokonzerwa kana dikita rinodzika netambo yemaamoni mahedhifoni. Pane imwe nguva, shoma ziya rinopinda mukati memusoro wejack kana chiteshi cheMheni uye rinokonzeresa yavo iPhone kubatirira mumusoro wefoni.
Dzimwe mhando dzekukuvara kwemvura dzinogona kukonzera dambudziko iri zvakare - hazvitore zvakawanda. Headphone jack pane akura maPhones uye chiteshi cheMwenje pane nyowani iPhones ndiwo maviri ekuvhurika kwekunze kweiyo iPhone, uye izvo zvinoita kuti zvinyanye kukanganiswa nekukuvara kwemvura. Kunyangwe iyo yese iPhone ichishanda zvakakwana mushure mekunge yanyorova, iyo headphone jack kana Mheni chiteshi inogona kusadaro.
Kana yako iPhone ikapwanyika kuita zvidimbu chiuru, iwe unogona kunge uchiziva kuti chii chakashata. Kana ichiri muchidimbu chimwe, pane chimwe chikonzero chakajairika nei maPhones akanamira pane headphone mode: Iyo headphone jack kana Mheni chiteshi inobviswa kure nepfungwa bhodhi.
“Mira kwechipiri. Ini ndinochengeta yangu iPhone mukati hukuru chimiro. ”
Kuvhara mahedhifoni mukati uye kunze kweiyo iPhone yako inofanirwa kwete kukonzera dambudziko iri. Handisati ndambozviona zvichiitika kubva mukushandisa kwese. Heuno mubvunzo wandingabvunze: 'Unoputira mahedhifoni kutenderedza yako iPhone paunenge usingaishandisa?' Mutengi angati hongu. (Huya ufunge nezvazvo, iye Genius uya akanditenderedza kuBIC peni yekunyepedzera akandiudza izvi, futi. Ini ndaizomupa chikwereti kana ndisingafunge kuti angapinda munyatwa.) Unogona here kufungidzira zvakaitika pano ?
Mushure mechinguva, kushushikana kubva kumahedhifoni kwakamonerwa kwakatenderedza iyo iPhone kumagumo yakakwenenzverwa mumusoro wejack kana chiteshi cheMheni kunove kwakakura zvekuti ivo vanotanga zvachose kukanda kure kubva kubva kune iro logic bhodhi. Zvakanaka kuputira mahedhifoni kutenderedza yako iPhone, chero bedzi uchiabvisa paunoita.
Nehurombo, kana iwe uri kuverenga izvi, pane mukana wakanaka kukuvara kwatoitwa uye iwe uchafanirwa kugadzirisa yako iPhone.
Kugadzirisa Sarudzo: Apple vs. Puls
Dambudziko iri rinonyanya kushungurudza kune vanhu vanoenda kuApple Store nekuti iyo chete kugadzirisa sarudzo Apple inopa kugadzirisa yakaputsika headphone jack ndeye chinja iyo iPhone yese. Vanhu vazhinji vanongoramba, vachisarudza kushandisa Bluetooth mahedhifoni kana diki yekutaurisa kugadzira uye kugamuchira nhare, asi zvinokanganisa zvikuru kana ruzha rusingashande pa iPhone yako.
Iyo kesi yakafanana neyakavhunika iPhone Mheni chiteshi. Apple inowanzo tarisa yako iPhone kana iyo Mheni chiteshi yaputswa. Iyo yekutsiva yakafukidzwa neako AppleCare + garandi.
Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, marara anonamira mukati meiyo iPhone's headphone jack kana Lightning port haina kuvharwa pasi pewarandi, saka kugadzirisa dambudziko iri nyore kunogona chaizvo zvinodhura.
Kana iwe uchida kugadzirisa yako iPhone nhasi ye zvakawanda pasi peApple, Pulse tichasangana newe kumba kana nzvimbo yaunosarudza mune isingasviki awa, uye ivo vanopa garandi yeupenyu pazvikamu uye nebasa.
Tora Nhare Itsva
Ungangoda kufunga nezvekuwana foni nyowani pane kuti yako yazvino igadziriswe. Kugadziriswa kwe iPhone kunogona kudhura nekukurumidza. Kana zvinopfuura chimwe chinhu chakakuvadzwa - izvo zvisingawanzoitika kana ukadonhedza iPhone yako kana kuiburitsa mumvura - kambani yekugadzirisa kazhinji inofanirwa kutsiva chikamu chega chega, kwete chete chefoni yemusoro. Tarisa uone iyo UpPhone nhare yekuenzanisa nhare kuongorora zvaunogona kuita!
Zvinoshungurudza kana iPhone ikabatika mumahedhifoni modhi, nekuti zvinoita kunge dambudziko riri nyore rinofanirwa kuve nemhinduro yakapusa. Zvinosuruvarisa kuti chidimbu chidiki chemarara kana donhwe remvura rinogona kukanganisa zvakadaro pa iPhone yako. Ini ndinovimba zvechokwadi kuti yako iPhone haisisiri yakanamatira pamahedhifoni maitiro, asi kana zvirizvo, zvirinani iwe unoziva zvekuita zvinotevera. Inzwa wakasununguka kusiya chirevo pazasi. Ndinoda kunzwa nezvenzira dzipi nedzipi dzekugadzira dzawawana kubvisa marara kubva kuhedhifoni jack kana Mheni chiteshi che iPhone yako.